विष्णु घिमिरे /चोपलाल सिलवाल
चैत्र ११ देखी नेपालमा लकडाउन भईरहेको छ । लकडाउनका कारण सवारीसाधनहरु नचलेपनी कतिपय भने पैदल हिडेर आफ्नो गन्तव्यमा गईरहेका छन् । लकडाउनका कारण काम बन्द भएपछी दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविको पार्जन गर्नेहरु पैदलै भएपनि गन्तव्यमा जान छाडेका छैनन् । हप्तौ दिन लगाएरै भएपनि आफ्नै घरजानेहरु राजमार्गमा प्रशस्त भेटिन्छन् । शिदार्थ राजमार्गमा पनि पैदल हिड्नेहरुको लाम देखिन्छ ।
पोखराबाट आएका पैदयात्रीलाई बुटवल पठाउदै
तानसेन नगरपालिकाको वडा नं. ८ माथिल्लो डुम्रेका केही स्थानीयहरुले लकडाउनको वेवास्तै गरेर भएपनि पैदल यात्रीको सेवामा जुट्न थालेका छन् । “महिला तथा वालवालिकाहरुसमेत कैयौ दिन राजमार्गमा खुट्टा खियाउदै हिडेको दुःख देख्न सकेनौ ।” डुम्रेका स्थानीय जित बहादुर सिलवालले भन्नुभयो ।“स्थानीयहरु संग पैसा संकलन गरेर पानी, चाउचाउ, भुजा र विस्कुट भएपनि वितरण गर्न थालेका छौं ।” गत वैशाख ३ गते देखी तानसेन वडा नं. ८ को माथिल्लो डुम्रेमा राजमार्गमै स्थानीयले पैदलयात्रीलाई निशुल्क खानेकुरा वितरण गर्दै आएका छन् । “दुःख परेर पैदल नै भएपनि हिडेका हुन् । हामी पनि मान्छे नै हो, लकडाउन भनेर पारीको घरको झयालबाट टुलुटुलु हेर्न सकेनौं ।” स्थानीय दिपक कार्कीले भन्नुभयो । “ हामीले नै पैसा उठाएर प्रहरी संगको समन्वयमा कतिपयलाई गाडी व्यवस्था गरेर पनि घर पठाएका छौं ।”
३ गते देखी राजमार्गमा ३ सय जना पैदल यात्रीलाई पानी र खाजा खुवाएको स्थानीय संग रेकर्ड छ । शुक्रवार पोखराबाट पैदल आएका ३६ जनालाई स्थानीय प्रहरी संग समन्वय गरि स्थानीयकै खर्चमा गाडीमा चढाएर बुटवल पठाएका छन् । रमपम चाउचाउ, सुदिप कार्की, भक्त बुचा लगायतका दर्जन बढीले खाद्यान्न, पानी तथा चन्दा संकलन गरि पैदल यात्रीको उद्यार गरिरहेका छन् । राजमार्गमा पैदल हिड्ने सवैलाई एक बोत्तल पानी, एउटा चाउचाउ, विस्कुट र भुजा वितरण गरिरहेका छन् ।